Etu esi ghagharia kọmputa ochie site na iji Linux - Ikkaro
Inicio >> Ndozi >> Na-agbake ihe ochie Linux kọmputa
M na-aga n'ihu na PC na gadget mmezi ọ bụ ezie na nke a enweghị ike ịtụle n'onwe ya mmezi. Ma, ọ bụ ihe ha na-ajụkarị m. Tinye ụfọdụ sistemụ arụmọrụ na-eme ka ha rụọ ọrụ na kọmputa na kọmputa ochie ma ọ bụ nke ochie.
N’agbanyeghi na m na-agwa gị ntakịrị ihe m kpebiri ime n’okwu a, enwere ike ịgbatị ya karịa. Aga m anwa imelite ma hapụ ihe m mere oge ọ bụla ewepụtara ikpe a.
Soro usoro nke isiokwu na nrụzi kọmputa. Ihe ndi mmadu nile nwere ike idozi n'ulo anyi mgbe kọmputa na-agbanye ma ị hụghị ihe ọ bụla na ihuenyo.
ACER itlọ L460
Ha hapụrụ m ka m melite kọmputa ochie, Acer Veriton L460. Na ọ malitere na Windows Vista Business OEM, ma ugbu a, ọ nwere Windows 7 arụnyere.
A naghị akwado Windows 7 na kọmputa a enweghị ike ịkwaga Windows 10. Ọ gafeela. Dịkarịa ala iji ụdị Windows kwadoro
A na-eji kọmputa arụ ọrụ maka nchọgharị na maka ọrụ ụlọ akwụkwọ, Jiri ederede ederede Okwu, LibreOffice. Gụọ pdf ma bipụta ihe.
Ọ bụrụ na ị hụ njirimara nke PC, ọ nwere naanị 1Gb nke RAM, nke taa ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịba uru.
Windows ma ọ bụ Linux
Na ihe omimi Ha gwara m ka m tinye Linux n’agụnyeghị ya. Ya mere echefuru m ịchọ ụdị Lite ma ọ bụ itinye Windows XP nke na-enweghịzi nkwado yana ịwụnye sọftụwia pirated. Echere m na ọ dị mma itinye Linux na ya. Uru dị na nke a.
Ihe nkesa Linux dị larịị maka ndị ọzọ na kọmputa
Nke a chọrọ edemede n'onwe ya, mana lee ụfọdụ nhọrọ:
Uru nke Wụnye Linux
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ ma m ga-atụle ha ọzọ na a ihe nkesa oku.
Nwalee Xubuntu Linux
Oge a ka m na-ala azụ n'etiti ịwụnye Xubuntu ma ọ bụ Manjaro XFCE, nke bụ nkesa abụọ chọrọ 512 MB Ram. N'ihi ya, ọ kwesịrị ịrụ ọrụ were were.
Emechara m wụnye Xubuntu na nkwụsi ike ya mbipute 18.04. Ntughari nke Manjaro na-atụ m ụjọ, n'ihi na echiche nke pc a bụ na ọ ga-akwụsi ike ka ike ghara ịgwụ ha n'iji Linux. Enyela ha nsogbu obula.
Ya mere, anyị na-aga na nwụnye. Nzọụkwụ dị mfe.
Dika PC abiaworị na nkwado ndabere ya emere, yabụ enweghị ike ịchekwa data ọ bụla ma nwee ike ihichapụ ọdịnaya niile.
Jiri USBuntu kee USB
Iji wụnye M kere a USB bootable na Xubuntu iso site na iji Etcher. Enwere ọtụtụ ụzọ iji kee eriri bootable mana enwere m mmasị na ngwa multiplatform ahụ.
Budata ihe oyiyi ISO nke nke Xubuntu site na ebe nrụọrụ weebụ gị
Anyị na-ebudata Etcher, anyị na-emeghe ya ma mee ya, anyị na-emeghe ya site na ịpị abụọ.
Window nke nwere usoro 3 ga-emepe. Họrọ ISO, USB na flash
Primero anyị na-ahọrọ onyonyo ISO nke anyị budatara na Xubuntu, anyị họrọ otu nke anyị chọrọ ịme bootable. Maka nke a ị ga-etinye USB, ma kpachara anya na nke a, ahọrọla draịvụ dị iche iche ma hichapụ ihe niile. Maka na ọ na - akwọ ụgbọala ị họrọ iji wụnye Linux.
N’ikpeazụ ị kụrụ Flash! na njikere.
Ozugbo anyị nwere USB anyị ga-etinye ya. Maka nke ahụ, anyị na-etinye ya na PC, anyị amalite ya. Y’oburu n’ibido USB nke ukwu, i ghaghi ịga n’ihu.
Ọ bụrụ na ọ dịghị buut si USB ma ọ na-atụgharị na nkịtị, na nke a na-ebu Windows 7 mgbe ahụ ị ga-abanye BIOS ma gbanwee nhọrọ iji buruo diski mpụga na mbụ.
A na-enweta BIOS site na ịpị F2 ozugbo ị gbanyechara. Anyị na-agbanye F2 ruo mgbe ọ banyere. Na ụfọdụ kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ kama F2 ọ bụ Esc ma ọ bụ ụfọdụ igodo ndị ọzọ, ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ ị ga-achọ Google ma ọ bụ na akwụkwọ ntuziaka nke motherboard gị nke igodo iji abanye BIOS.
Olee otú o si anya
Ọ dị ka nke a. Na-arụ ọrụ dị ka amara.
Eziokwu bu na o mara mma. Nchịkọta nhọrọ dị ntakịrị, mana n'ezie ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ bụrụ ìhè, anyị enweghị ike ịjụ ọtụtụ ihe na ọkwa eserese.
Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ, na a gbara gị ume ịnwale Linux ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ ikwu
Isiokwu abụọ m ga-atụle na miri emi na isiokwu ọzọ
Mepụta ederede banyere nkesa kachasị mma maka kọmputa ochie na obere akụ ma ọ bụ laptọọpụ
Kọwaa otu esi eme USB bootable iji wụnye nkesa Linux ma ọ bụ Windows.
Categories Linux, Ndozi Igodo bọtịnụ
A akụkọ ihe mere eme nke Spain site n'aka Arturo Pérez-Reverte
0 kwuru na "Iweghachite kọmputa ochie na Linux"
August 29, 2020 na 11:22 pm
1 ACER itlọ L460
1.1 Windows ma ọ bụ Linux
2 Ihe nkesa Linux dị larịị maka ndị ọzọ na kọmputa
3 Nwalee Xubuntu Linux
3.1 Jiri USBuntu kee USB
3.2 Wụnye Xubuntu
3.3 Olee otú o si anya
4 Ihe edeturu